Saxaaxa gabatee keessatti dirreewwan walqabatan lama yoo lama cuqaaste, ykn Galchi - Walquunnamttii Haaraa jedhu yoo galchite, qaaqni Walquunnamtiilee jedhu ni argama. Amaloonni kun gara fulduraatti gaafattoota hunda keessatti ni fayyadu.
Gabateewwan adda addaa lama ati walqabsiisuu barbaadde adda siif baasa.
Dirreewwan deetaa lama kan walquunnaman adda siif baasa.
Gosa wal qabannaa walquunnamsiisaa filamee adda baasa. Kuusdeetaan tokko tokko cia tuuta gosoota danda'amanii qofa gargaara.
Walqaba keessaan, gabateen bu'aa kan of keessatti qabatu galmee dirreewwan wal fakkaatan qabate qofaaf. LibreOffice SQL keessatti gosni walqabsiistuu akkanaa kan uumamu haraggoo walgitaa WHERE dhaani.
Walqaba bitaan, gabateen bu'aa dirreewwan hunda gabatee bitaa fi dirreewwan gara mirgaa dirreen walqabsiisuu yoo walfakkaate qofa of keessatti qabatan qabata. LibreOffice SQL keessatti walqabsiiftuun akkanaa ajaja LEFT OUTER JOIN walgita.
Walqaba mirgaan, gabateen bu'aa dirreewwan hunda gabatee mirgaa fi dirreewwan gara bitaa dirreen walqabsiisuu yoo walfakkaate qofa of keessatti qabatan qabata. LibreOffice SQL keessati walqabsiiftuun akkanaa ajaja RIGHT OUTER JOIN walgita.
Walqaba guutuuf, gabateen bu'aa dirreewwan hunda gabatee bitaa fi mirgaa of keessatti qabata. SQL LibreOffice keessatti gosni walqabsiistuu akkanaa FULL OUTER JOIN walgita.
NATURAL jefuraa hima SQL kan qunnamtii qindeessu saaga. Qunnamtiin tarjoota hunda kan maqaa tarjaa walfakkaatu qabu gabatee lachuu keessaa walqaba. Bu'aan gabatee walqabee cimdii tokko tokkoo tarjoota walqixa moggaafamaniif tarjaa tokko qofa qabata.
Title is: Quunnamtiilee